Akụkọ - Mmalite na akụkọ ihe mere eme nke mmanụ dị mkpa
China bụ n'ezie mmepeanya oge ochie nke izizi jiri ahịhịa na-esi ísì ụtọ wee nwee ahụ ike. A na-eji osisi eme ihe n'oge ochie, na-eji ihe ọkụkụ agwọ ọrịa, na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ iji mee ka nkwekọrịta na nhazi nke anụ ahụ na nke uche. .
Anwansi nke okike nyere anyị a na-aga n'ihu isi iyi nke ndụ, na ọ bụkwa onyinye nke okike ka ihe a kpọrọ mmadụ, nke mere na anyị nwere ike mgbe niile na-enwe dị iche iche akụ na-enye, na osisi dị mkpa mmanụ bụ otu n'ime ha. Akụkọ ihe mere eme mmadụ jiri mmanụ dị mkpa dị ka akụkọ gbasara mmepeanya ụmụ mmadụ, na isi mmalite ya siri ike nyocha. Dabere na ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme, otu dibịa Arab na-eji mgbagha iji wepụ ihe ifuru, nke emere n'ime mmanụ dị mkpa ruo oge Gris oge ochie. Enwere ike ịhụ na akwụkwọ ahụike n'oge ahụ dere ọtụtụ ojiji bara uru nke mmanụ dị mkpa, ọbụlagodi n'Ijipt oge ochie tupu 5000 BC. Otu nnukwu onye nchụàjà na-eji ihe resin emeju ozu mgbe niile iji mee ozu. Nwere ike iche n'echiche dị oke ọnụ ahịa mmanụ ndị dị mkpa n'oge ahụ.
N'ọtụtụ okpukpe oge ochie ma ọ bụ agbụrụ dị iche iche, n'agbanyeghị ụdị ememe ma ọ bụ ememe, a na-eji ngwa nri dị iche iche sitere na osisi eme ihe iji tinye nsọ dị nsọ n'ememe ahụ. Anyị nwere ike ịmụta site n'ọtụtụ akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ gbasara Akwụkwọ Nsọ. Enwere ike ịchọta ya na ndekọ.
Ka ọ na-erule na narị afọ nke 13, thelọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọgwụ nke Bologna na Italytali chepụtara ihe na-akụnwụ ahụ nke mmanụ dị iche iche dị mkpa, bụ nke a na-ejikarị arụ ọrụ ịwa ahụ. A sịrị na Hugo, onye mepụtara ọgwụ a, si na Bologna School of Medicine. Nchoputa.
Na narị afọ nke iri na ise, Verminis chepụtara ụdị "ọmarịcha mmiri", mgbe ahụ, nwa nwanne ya nwoke mere "Fanari Cologne" a ma ama. Beendị Cologne a egosila na ọ nwere mmetụta disinfection, a na-ejikwa mmanụ dị mkpa nke ahịhịa osisi mee ụdị cologne a.
Na France na narị afọ nke 16, ụfọdụ ndị na-eyi uwe aka na-esi ísì ụtọ nke nwere lavender na ahịhịa dị iche iche dị na mpaghara. N’ihi ya, ndị yi uwe aka na-esi ísì ụtọ na-anagide ọrịa ụfọdụ na-efe efe n’oge ahụ. Ọtụtụ ndị ọchụnta ego bidoro ọkachamara na nke ọma. Mmepụta nke mmanụ ndị dị mkpa maka isi. Typedị mmanụ a dị ezigbo mkpa nyekwara ndị Gris aka igbochi ọrịa na-efe efe. Kemgbe ahụ, ihe na-esi ísì ụtọ nke dị na mmanụ dị mkpa dọtara mmasị nke ọtụtụ ndị ọkà mmụta ma gbasaa ebe dị iche iche. Karịsịa n'afọ ndị na-adịbeghị anya, aromatherapy ejiri nwayọọ nwayọọ mụbaa. Mee ka uche nke ụwa.
Taa, a na-eji mmanụ dị mkpa eme ihe n'ọtụtụ akụkụ. Ebe a na-emepụta mmanụ dị mkpa n'ụwa bụ obodo mgbe ochie Grasse dị nso na French Riviera. Ya mere, ma e wezụga mmanya, a pụkwara ile France anya dị ka ala dị nsọ nke mmanụ dị mkpa taa.